Mashandisiro Aungaita iro GORE Basa muMicrosoft Excel
Muri pano: musha / Windows / Mashandisiro Aungaita iro GORE Basa muMicrosoft Excel
Kana iwe uchida kuburitsa nekukurumidza gore kubva pazuva mune Microsoft Excel, unogona kushandisa basa reGORE. Izvi zvinokupa iwe kukosha kwegore muchitokisi chakaparadzana, zvichikubvumidza iwe kuti uishandise mune yakasarudzika fomula.
Basa reGORE rinogona kubatsira zvakanyanya kana waita akashandura zvinyorwa kuita zvemazuva ano muExcel, uye iwe unoda kutora iyo yegore kukosha kubva ku data rako.
RELATED: Maitiro ekushandura Chinyorwa kusvika Mazuva Akakosha muMicrosoft Excel
Kuti ushandise basa reGORE, iwe uchafanirwa kuvhura yako Excel spreadsheet uye uine maseru ane mazuva (mune chero fomati) akaiswa seyakakodzera "Zuva" nhamba kukosha.
Zvakanakisa kumisikidza aya maseru kukosha se "Nguva Yakareba" kana "Pfupi Zuva" nhamba kukosha uchishandisa iyo Imba> Nhamba inodonhedza menyu. Iwe unogona zvakare kushandisa maseru ane echinyakare mafomati mafomati.
Kana iwe uine zuva rakashandurwa kuita nhamba, unogona zvakare kubvisa gore kubva ku5-manhamba eExcel "serial" nhamba, iyo inoverenga huwandu hwemazuva kubva musi wa1 Ndira 1900. Unogona kuona kukosha uku nekushandura chero kukosha kwezuva kuita huwandu hwenhamba kukosha uchishandisa iyo Imba> Nhamba menyu.
Nekuda kweuyu muganho, iwe unogona chete kushandisa GORE kuburitsa gore kubva pamazuva anotanga kubva musi wa1 Ndira 1900 zvichienda mberi. Basa racho harishande nemazuva apfuura kupfuura ipapo.
Kuti ubvise gore kubva pasero rine zuva, mhando =YEAR(CELL), kuchinja CELL nechitokisi. Semuyenzaniso, =YEAR(A2) inotora kukosha kwezuva kubva muchitokisi A2 uye kubvisa gore kubva pairi.
Muenzaniso uri pamusoro unoratidza masitaera akasiyanasiyana eanokosha ezuva mukoramu A. Zvisinei nemhando yacho, iro basa reGORE rinoshandiswa mukoramu B rinokwanisa kuverenga izvi uye kubvisa kukosha kwegore.
Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare kushandisa mashanu-manhamba eExcel "serial" nhamba, panzvimbo peye cell cell.
Muenzaniso uri pamusoro unoratidza izvi uchishandisa fomula =YEAR(43478), ine serial nhamba (43478) inoenderana nezuva (13 Ndira 2019), iro iro basa reGORE rinokwanisa kunzwisisa. Kubva pane ino serial nhamba, iro gore (2019) rinodzoserwa.
Iko kukosha kwakadzoserwa nefomula ine iro basa reGORE kunogona kuzoshandiswa neimwe fomula. Semuenzaniso, unogona kuzvisanganisa neDATE fomula (semuenzaniso. =DATE(YEAR(A2),1,11 ) kugadzira kukosha kwezuva.
Kana iwe uchida kuidzokorora pamatanho ezuva akawanda, unogona shandisa chibato chekuzadza kuteedzera iyo YEAR fomula mumamwe maseru.
Nzira yekufananidza Two Excel Tables neFormula
Maitiro Ekutsvaga Maitiro Ekufananisa muExcel